ओलीलाई बैठक शब्दको ‘एलर्जी’ छ, सत्ता जोगाउन आफैं आन्दोलन गर्न लगाउनु भएको हो : यादव - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः मंगलबार कोरोना संक्रमणबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले फेरि विवाद थपेको छ ।
कोरोना संक्रमण सर्ने भएकोले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन नसकिने तर्क प्रधानमन्त्रीले गरिरहँदा आफ्ना पक्षमा सयौं मानिस सडकमा उतार्न निर्देशन दिएको कुरा प्रधानमन्त्रीले स्मरण गर्नुपर्ने टिप्पणी भइरहेको छ ।
नेकपा विवाद चर्किँदै जाँदा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने माग गर्दै केन्द्रीय कमिटी सदस्यले हस्तक्षर बुझाएका छन् ।
यसैबीचमा आज (मंगलबार) कोरोना संक्रमणबारे विज्ञसंगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले आफ्नै पार्टी नेकपा गैरजिम्मेवार देखिएको बताए । उनले कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा नेताहरूले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गरिरहेको भन्दै पार्टी र नेता गैरजिम्मेवार देखिएको टिप्पणी गरे ।
सो क्रममा उनले भनेका थिए, ‘२५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन दिएका छैनौं, मेरै पार्टीमा ४५० जनाको केन्द्रीय कमिटी तुरुन्त चाहियो भन्छन् । कहाँ बस्ने हो ? के गर्ने हो सोच केही छैन ? स्थायी कमिटी अहिले बस्नुपर्यो, भरे बस्नु पर्यो, यसबाहेक केही छैन ।’
तर २५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन दिएका छैनौं भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिले उनैलाई गिज्याइरहेको छ । असार १६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट राजीनामा माग भएपछि ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउने प्रयास स्वरुप बालुवाटारमा हुलका हुल मानिसको भेला गरे । आफू पक्षीय नेता, सांसद, व्यापारीसमेतलाई भेला गर्न भ्याएको स्रोतको दाबी छ ।
याे पनि पढ्नुस नेपालमा थप ७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमित संख्या १०९ पुग्यो
यति मात्रै हैन, आफ्नो राजीनामा माग भएपछि विद्यार्थी नेताहरूलाई रातारात बालुवाटार बोलाएर आफ्नो पक्षमा सकडमा नाराबाजी गर्न निर्देशन दिए । निर्देशन दिएको भोलिपल्टै संयौको संख्यामा विद्यार्थी ओलीको पक्षमा नाराबाजी गर्न लागे । त्यहाँ कोरोनाबाट बच्न कुनै सुरक्षाका सामग्री प्रयोग गरिएको थियो न त सामाजिक दुरी नै कायम ।
कोरोनाको कहरकै बीच २७५ जनाभन्दा सहभागि हुने संसद बैठक बस्यो । लकडाउनकै बीचमा बसेको संसद बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेर संविधान संशोधन गरेको थियो । त्यहाँ आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाइएको थियो । आवश्यकसुरक्षा मापदण्डसहित नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पनि आयोजना भएकै थियो । तर, ओली भने बैठकबाट भाग्न कोरोनाको बहाना बनाइरहेको नेकपाका नेताहरूको आरोप छ ।
आज विज्ञसंगको छलफलका क्रममा दिएको नेकपा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकको मागबारेको अभिव्यक्ति पनि त्यसकै उपज भएको उनीहरूको दाबी छ । यस्तै, आरोप लगाउनेमध्येका एक हुन्, पूर्वमन्त्री तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मात्रिका यादव । यादव ओलीलाई बैठक शब्दसँग इलर्जी रहेको र अनेक बहाना बनाएर बैठकबाट भागिरहेको आरोप लगाउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘पद र कुर्सी जोगाउन बालुवाटारमा हुलका हुल मान्छे जम्मा पारेर छलफल गर्न हुने, सडकमा आफ्नो पक्षमा नाराबाजी गर्न मान्छे उतार्ने । अहिले पार्टी बैठक राखौं, पार्टीमा देखिएको विवादबारे समाधान निकालौं भन्दा कोरोना देखाउँदै पन्छाउने ।’ उनी आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर, सामाजिक दुरी कायम गरेर, आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर जति संख्या भए पनि बैठक बस्न सकिने बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई आफ्नो पद र कुर्सी सबैभन्दा प्यारो छ । त्यसका लागि बालुवाटार र सडकमा लाखौं जनता उतार्न पनि तयार हुनुहुन्छ । त्यतिबेला कोरोना संक्रमण फैलिन्छ भन्ने चिन्ता हुँदैन । तर, पार्टीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि बैठक माग हुन्छ, उहाँ (ओली) बैठक राख्दै चाहनुहुन्न । बैठक राखे पनि भाग्नुहुन्छ । किनकी उहाँसँग कोरोनाको बहाना छ’, यादवले आक्रोशित हुँदै भने ।
उनले गत चुनावमा व्यक्तिलाई नभएर पार्टीलाई जनताले भोट दिएको भन्दै ओलीको यहीँ अमहताले पार्टी ध्वस्त हुने चिन्ता व्यक्त गरे । त्यसका लागि स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
यादवले प्रश्न गर्दै भने, ‘कोरोनाको संक्रमण हुँदा संसद बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीले पार्टी जोगाउन बालुवाटारमा हुलका हुल मान्छे बोलाउनु भएकै छ । सकडमा जुलुस निकाल्न लगाउनु भएकै छ । सामाजिक दुरी कायम गर्दै, आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै पार्टी बैठक बोलाउन किन समस्या ?’
नेकपा विवाद श्रृंखला
गत असार १० गते नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । बैठकमा एकदिन उपस्थिति भएर त्यसपछि अनुपस्थित प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले १४ असार मदनजयन्तीका अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई हटाउन भारत र पार्टी नेताहरूले षड्यन्त्र गरिरहेको अप्रत्याशित अभिव्यक्ति दिए ।
याे पनि पढ्नुस विप्लव समूहका गतिविधि बन्द, कोरोनाबारे जनचेतना फैलाउन कार्यकर्तालाई आग्रह
स्थायी कमिटी बैठकबाट भागेर छुट्टै कार्यक्रममा आफूलाई हटाउन भारत र पार्टी नेताहरूले षड्यन्त्र गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टी शीर्ष नेतृत्व आक्रोशित भयो । त्यएपछि १६ असारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा उनको राजीनामा नै मुख्य एजेन्डा बन्यो ।
अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपाल तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायत नेताले राजीनामा मागेपछि नेकपा विवाद उप्कर्षमा पुग्यो । सहमति खोज्ने कोसिसका लागि १७ असारपछि बैठक लगातार स्थगित हुँदै आएको थियो ।
त्यसपछि साउन १३ गतेका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक ओली एक्लैलै स्थगित गरेपछि प्रचण्डले स्पष्ट बहुमत पुर्याउँदै सञ्चालन गरेका थिए । उक्त बैठकले ओली एक्कलै बैठक स्थगित गर्नु अनुचित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सहमति गर्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दियो ।
त्यसपछि एक साताको बीचमा विवाद समाधानका लागि आइतबार र सोमबार ओली–प्रचण्डबीच वार्ता भयो । छलफलमा नेकपाका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि सहभागी थिए ।
छलफलमा ओलीले पार्टीको विवाद समाधानका लागि सचिवालय बैठक गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता खनालले भने स्थायी कमिटीबाटै समस्याको समाधान खोजिनु पर्ने जवाफ दिएका छन् । ओली स्थायी कमिटी बैठक राख्न सहमत भएनन् । जसका कारण वार्ता निष्कर्षबिहीन भएको छ । अहिलेसम्म नेकपा विवाद कसरी टुंगिन्छ भन्ने अन्यौल छ ।
ट्याग्स: केन्द्रीय कमिटी, केपी शर्मा ओली, कोरोना, नेकपा, प्रचण्ड, स्थायी कमिटी